Akwụkwọ Jason Oakley na Martech Zone |
Edemede site na Jason Oakley
Ana m anwa inye gị ego m - gịnị kpatara ị ji eme ya siri ike? Nke a bụ mmetụta a na-ahụkarị n'ọtụtụ ndị na-azụ B2B. Ọ bụ 2020 - gịnị kpatara anyị ji emebi oge ndị na - azụ ahịa anyị (yana nke anyị) yana ọtụtụ usoro mgbe ochie? Nzukọ kwesịrị iji sekọnd ole akwụkwọ, ọ bụghị ụbọchị. Ihe omume kwesịrị ịbụ maka mkparịta ụka bara uru, ọ bụghị isi ọwụwa. Imel na-azịza ya na nkeji, anaghị efu na igbe mbata gị. Mmekọrịta ọ bụla